Ukuxhotyiswa koluntu - AfricArXiv
I-TCC iAfrika kunye ne-Eider Africa bayasebenzisana nabaPhengululi abaQeqesha ngokuSebenza abavela kwi-Sub Sahara Africa
Ukuba ungumphandi, mhlawumbi uqhelene nomjikelo wobomi wophando nayo yonke imingeni kunye namathuba aza nayo. Ziindaba ezimnandi ukuba ungumphandi ovela kwi-Afrika esemaZantsi eSahara kuba amaqabane ethu, i-TCC Afrika kunye ne-Eider Africa babhengeze ukusebenzisana kwabo ekunikezeleni ngcebiso Funda ngokugqithisileyo…
I-Ocean Acidification Africa (i-OA-Africa) yinethiwekhi ye-pan-Afrika ebizwe ngokukodwa ukulungelelanisa kunye nokukhuthaza ulwazi nge-acidification yolwandle (OA) kunye nophando e-Afrika.
By USam Dupont, iinyanga 6 iinyanga 6 edlulileyo
I-TCC ye-Afrika kunye ne-AfricArXiv iphumelele kwi-ASAPbio sprint
Ngaphantsi kwesihloko esithi Ukukhuthaza ukuKhutshwa nokuPhononongwa kwangaphambi koPapasho, i-ASAPbio ibambe i-sprint yoyilo yokunyusa ukubonakaliswa kwemibono emitsha kunye esele ikho yokukhuthaza ukukhutshwa nokuprintwa kwangaphambili. Umsitho ububanjelwe ngokubambisana neWellcome, iChan Zuckerberg Initiative, iHoward Hughes Medical Institute, iDORA, i-EMBO Press, i-PLOS, neLife. Funda ngokugqithisileyo…
By TCC Afrika kunye neAfrikaArXiv, iinyanga 10 iinyanga 7 edlulileyo
I-AfricArXiv ixhasa i-COAR kwigalelo labo kwi "Ukukhethwa koGcino lweDatha: Iikhrayitheriya ezibalulekileyo"
Ngomhla wamashumi amabini anesine kuNovemba, ngo-24 i-Confederation of Open Access Repositories (i-COAR) yapapasha impendulo kwiDatha yoGcino loKhetho, isabelana ngezinto ezibaxhalabisayo nokuba kutheni le nto iza kuba ngumceli mngeni kwabanye abaphandi nakwiindawo zokugcina. Abameli abavela kwiijenali, abapapashi kunye nemibutho yonxibelelwano yezifundo, i-FAIRsharing Community yahlangana Funda ngokugqithisileyo…
By I-AfricArXiv, iinyanga 10 iinyanga 7 edlulileyo
I-AfricArXiv kunye ne-COS iqabane ukuxhasa uphando lwe-pan-Afrika
Ngaphandle kweenkonzo ezivulekileyo zokupapasha iinkonzo kuluntu lwayo, i-AfricArXiv iya kuququzelela amathuba angakumbi okusebenza ngokungqongqo nokuzala kwakhona.
By I-AfricArXiv, iinyanga 11 iinyanga 7 edlulileyo
IZiko loQeqesho kuNxibelelwano liqalisile ukubonelela ngezifundo kwi-intanethi. UNks Joy Owango, uMlawuli oLawulayo uphawule ukuba Le yayiyinxalenye yesicwangciso-qhinga sethu sowama-2019/2020, esathi sawungenisa kwiBhaso le-Invest2Impact Award saza saphumelela. Ngaphandle koku sonwabile ngolu phuculo kwaye sijonge phambili ekuxhaseni uninzi lwabaphandi kunye nezifundiswa ngendlela esinokuthi siluphucule ngayo uphando lwabo Funda ngokugqithisileyo…
By I-TCC yase-Afrika, 1 kunyaka iinyanga 7 edlulileyo